वि.सं. २०७२ वैशाख ०३ गते बिहीबारको राशिफल जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
वि.सं. २०७२ वैशाख ०३ गते बिहीबारको राशिफल
वि.सं. २०७२ वैशाख ०३ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१५ अप्रिल १६ तारिख,
इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५ः३४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६ः१९ बजे
काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय ः:बिहान ०५ः४१ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६ः२८ बजे
पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५ः४६ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६ः३४ बजे
वैशाख कृष्णपक्षको द्वादशी तिथि, बिहान ०८ः०२ बजेसम्म, त्यसपछि त्रयोदशी तिथि,
पूर्वाभाद्रा नक्षत्र, बेलुका ०८ः५५ बजेसम्म, त्यसपछि उत्तराभाद्रा नक्षत्र, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा, दिउँसो ०३ः२० बजेसम्म, त्यसपछि मीन राशिमा,
ब्रह्म योग, साँझ ०५ः३२ बजेसम्म, त्यसपछि ऐन्द्र योग,
वणिज करण, साँझ ०६ः४८ बजेसम्म त्यसपछि विष्टि (भद्रा) करण,
आनन्दादि योग ः मुद्गर, चन्द्रवर्ण ः कालो, चन्द्रदिशा ः पश्चिम, योगिनीदिशा ः नैऋत्य, वारशूल ः दक्षिण, नक्षत्रशूल ः दक्षिण,
आजको व्रत÷पर्व ः प्रदोष व्रत,
आजको मूहुर्त ः रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा),
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने व्रत÷पर्व तथा शुभ मूहुर्त ः
०४ गते ः नेवारी पर्व मातातिचह्रे पूजा, अग्निवास(होमादि), दैलो राख्ने,
०५ गते ः दर्श श्राद्ध, मातातीर्थ स्नान, मातृसम्मान दिवस, आमाको मुख हेर्ने दिन, हलो तथा निशि बार्ने दिन, गृहप्रवेश, ऋण लिनेदिने, दैलो राख्ने,
०६ गते ः अग्निवास(होमादि), ऋण लिनेदिने, दैलो राख्ने,
सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी बन्नु पर्ने भएकाले गर्नै पर्ने र विशेष काममा बाधा पुग्नसक्छ । दैनिक कामकाजमा बाधा आउने छ । शत्रुहरूको गतिविधिले असर पार्नसक्छ । साँझपख अझ प्रतिकूल छ । आजका लागि शुभअङ्क ७ र शुभरङ्ग कालो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ शं शनैश्चराय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि आजको दिन राम्रो छ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । सुमधुर दाम्पत्यसम्बन्ध र सन्ततिबाट राम्रो सहयोग प्राप्त हुनेछ । अविवाहितहरूमा विपरीतलिङ्गीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । आजका लागि शुभअङ्क २ र शुभरङ्ग सेतो वा घिउरङ्ग हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ नमः शिवाय यस मन्त्रको कम्तीमा २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
बन्दव्यापार र कामधन्धाका क्षेत्रमा जतिखटे पनि सफलता प्राप्त नहुनाले निराश भइनेछ । दिउँसोका तुलनामा बिहान अझ निराशाजनक रहनेछ । दाम्पत्यसुख, प्रेमसम्बन्ध तथा पारिवारिक सम्बन्धमा दूरी बढ्ने छ । आजका लागि शुभअङ्क ३ र शुभरङ्ग गुलाबी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ अं अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १० पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
दिउँसोसम्म त्यति अनुकूल दिन छैन । तर परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल पाइने अवसर जुटेको छ । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमतामा ह्रास आउनेछ । सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नसक्दैन । आजका लागि शुभअङ्क ४ र शुभरङ्ग हरियो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ बुं बुधाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ८ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
पाचनप्रणाली र नसासम्बद्ध रोगीले आज रोगनिदानको उपाय प्राप्त गर्नेछन् । अझ साँझबाट सबैखालका झैझमेला र अनिष्टहरू मत्थर हुन थाल्नेछन् । लामो दूरीको यात्राको योजना छ भने बेलुकीपख अनुकूल हुनसक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग गाढा रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ नमश्चण्डिकायै यस मन्त्रको कम्तीमा ९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
अपराह्नसम्म त्यति अनुकूल दिन छैन तर त्यसपछि केही शान्तिको अनुभूति हुनेछ । शरीरमा रहेको अल्छीपनले छाड्दै जाने छ । काममा हौसला बढ्ने छ र शरीरमा स्फूर्ति जाग्नेछ । सामान्य समस्याहरूले पिरोल्ने सम्भावना छ । आजका लागि शुभअङ्क ६ र शुभरङ्ग सेतो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
दिनको सुरुवातमा मन खिन्न भए पनि आज तपाईंले गरेको प्रयास ढिलो गरी सफल हुनेछ । साथीभाइसित जमघट हुनसक्छ वा भोजभतेरमा सहभागी हुनुपर्ने छ, तर पाचनप्रणालीको कमजोरी चिन्ताको विषय बन्नेछ । आजका लागि शुभअङ्क ६ र शुभरङ्ग सफा र चम्किलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ शुं शुक्राय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
विभिन्न ठाउँको यात्रा हुने समय आएको छ । बेलुका घरायसी समस्याहरू देखापर्न सक्छन् । जीवनसाथीसित ठाकठुक पर्ने सम्भावना छ र मातापिता वा परिवारको ज्येष्ठ सदस्यको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्नसक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग छिर्केमिर्के बुट्टे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कें केतवे नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ७ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
सामाजिक काममा खटेजति उपलब्धी नपाउन सकिन्छ । वित्तीय र व्यापारिक लगानीका लागि चिन्तन भए पनि लगानी गर्ने अनुकूलता देखिंदैन । नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । व्यवसायीले बढी मिहिनेत र दौडधुप गर्नु पर्नेछ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग हलुका रातो वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
पारिवारिक सहयोग बढ्ने छ । स्वादिष्ट भोजनको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ । अब पछाडि बसेर तपाईंका कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन् । भौतिक सामान खरिद गर्नका लागि आज राम्रो दिन छ । धनागमका नयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन् । आजका लागि शुभअङ्क ८ र शुभरङ्ग ध्वाँसे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ रां राहवे नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १८ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
पारिवारिक समस्याले मन खिन्न हुनेछ । गरेका काममा समेत खासै राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । मनोरञ्जन र विलासितातर्फ मन आकर्षित भएपनि उपलब्धी नमिल्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी र विरोधीको चलखेल बढ्न सक्छ । आजका लागि शुभअङ्क १ र शुभरङ्ग कलेजी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ घृणि सूर्याय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ७ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
[email protected]l.com / [email protected] / [email protected]